4 Hababka ku saabsan sida loo iPhone kaabta
4 Hababka ku saabsan sida loo kaabta iPhone hor Casriyaynta in macruufka 9/8
1. kaabta All iPhone Data
2. kaabta iPhone Data mid mid
2.1 iPhone kaabta Xiriir
2.2 kaabta iPhone SMS
3. iPhone kaabta Location
4. 11 joogaan Most-weydiiyo
Apple ee macruufka 8 dambeyntii yimaadaan si ay u isticmaalaan on September 17, 2014, hadda aad ku socoto si aad u cusboonaysiiso si macruufka 8 badan hawada ama via Lugood, laakiin Apple sheegayaa in aad u baahan tahay ugu yaraan 4.6 GB ama meel dheeraad ah oo lacag la'aan ah (The meel loo baahan yahay lacag la'aan ah waa kala duwan oo ku salaysan model iPhone aad). Hayso jirin meel ku filan macruufka 8 update? Waa dhib ma laha, aad xiriirada gurmad, music, video, sawiro iyo ka badan oo ku saabsan iPhone in computer ama daruur, ka dibna iyaga tirtiri kartaa ka iPhone oo bilaash ah ilaa meel. Haddii aad leedahay meel ku filan, weli waad lagula talinayaa inay raad raac iPhone buuxa, haddii aad oggolaan inuu ka khasaare xogta weyn marka ay wax qaldamaan. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan idin tusin 4 hababka on iPhone talaabo sida loo raad raac ah talaabo.
Habka 1. Sida loo iPhone kaabta la MobileTrans 1 Click Habka 2. Sida loo kaabta iPhone in Lugood Habka 3. Sida loo kaabta iPhone adigoo isticmaalaya iCloud Habka 4. Sida loo kaabta jailbreak iPhone
Habka 1. Sida loo iPhone kaabta la MobileTrans 1 Click
IPhone kaabta in computer 1 click!
Kaabta xiriirada, jadwalka taariikhda, fariimaha, audio, video iyo sawiro ka iPhone in computer.
IPhone kaabta la eber khasaaro xogta, 100% ammaan ah.
Ceshano gurmad iyo wareejiyo iPhone, Android iyo Nokia (Symbian) telefoonka.
Full la jaan qaada iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS markii socda macruufka 9/8/7/6/5.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri xogta si / ka Nokia (Symbian) phone wareejinta.
Tallaabada 1. Isku Your iPhone in Computer
Ka dib markii la rakibey, abuurtaan gurmad Lugood this on computer kale. Marka ay suuqa kala hoose muujinaysaa ilaa, dooro Up Dhabarkaaga iPhone hab oo guji u dhaqaaqo.
Connect aad iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah. Ka dib markii la aqoonsan yahay, aad iPhone la soo bandhigi doonaa dhanka bidix ee.
Tallaabada 2. iPhone Xiriirada kaabta, Messages, Photos, Music, Calendar iyo Video
Tag dhexe ee suuqa, dooran content aad rabto in aad gurmad. Markaas, riix Start Copy . Markaas, software ah gurmad doono content aad iPhone in computer. Marka aad lumiso xogta ama aad u hesho telefoonka cusub, waxaad dib u soo ceshano karaan gurmad ah oo lagu wareejiyo waa in.
Habka 2. Sida loo iPhone kaabta in Lugood
Si gurmad aad iPhone, mid ka mid ah hababka ugu-weyn loo isticmaalo waa in la isticmaalo Lugood. Sidaa daraadeed, aad awoodaan in ay gurmad ugu xogta ku saabsan iPhone. Ku socda iyada oo tutorial ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo isticmaalo Lugood in la sameeyo gurmad iPhone.
1. Waa maxay ma kaabta Lugood?
Lugood ilaa Taageeray ugu xogta ku saabsan iPhone, oo ay ku jiraan ku giringiriya Camera, xiriirada, xiriirada iyo jecel, jadwalka taariikhda, Safari, autofill, khasnado / database, qoraalo, xisaab-mail, wac taariikhda, fariimaha, farriinta, cadaymaha cod, goobaha network, keychain, macluumaadka codsiga dukaanka app, goobaha codsiga, in-app iibsadaan, xisaab xarunta ciyaarta, wallpapers, doorbidida adeega goobta, rakibay profiles, khariidado iyo kaabidda jeedin badbaadiyey iyo ka badan.
2. Tallaabooyinka iPhone kaabta la Lugood?
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer via cable USB ah.
Tallaabada 2. Open Lugood.
Tallaabada 3. galeeysid bidix ee Lugood, guji si aad iPhone hoos AALADAHA . Tani waxay kor u soo Bixiyaa guddi gacanta iPhone ku yaal dhinaca midig.
Tallaabada 4. In ka Kooban tab, u tag qaybta hayaan ah. Riix Back Up Now .
Tallaabada 5. habka gurmad wuxuu ku bilaabmayaa. Fadlan sug ilaa uu ka dhameeyay.
3. Tallaabooyinka sir kaabta iPhone
Si aad u gurmad iPhone ammaan ah, waxa kale oo aad sir karaan gurmad iPhone. Imayladad gurmad iPhone ka dhigan tahay in oo kaliya mid ka mid ah waxa ogyahay sirta Macdan karo xogta laga gurmad ah. Haddii aad illowdo furaha oo doonaya in ay dib u bilowdo, waa in aad qabataa software ah oo buuxda loo soo celiyo oo ay doortaan in ay ka taagay iPhone cusub marka Lugood aad jirtey in ay doortaan gurmad ka si loo soo celiyo. Hoos waxaa ku tutorial buuxda, waxa ay raacaan.
Tallaabada 1. In aad guddi gacanta iPhone, tag oo Kooban Murayaad, sax hayaan sir iPhone .
Tallaabada 2. A hadal Minipiller-up, weydiinaya in aad ku qortaa erayga sirta ah ee gurmad iPhone. Qortaa erayga sirta ah iyo habka gurmad bilaabaa si toos ah.
4. Halka Laga Helo iPhone Location?
Guulaystaan ​​taageero aad iPhone in Lugood? Waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad hubsatid halkaas oo gurmad iPhone yahay. gurmad Lugood badbaadi doonaa on your computer, laakiin goobaha gurmad kala duwan yihiin OS kombiyuutarka. Halkan waxaa ku faahfaahsan goobaha gurmad Lugood , waxaad heli kartaa jeeg.
Habka 3. Sida loo iPhone kaabta adigoo isticmaalaya iCloud
iCloud waa hab kale oo ah in Apple waxay bixisaa si ay gurmad iPhone, laakiin waxaa ka badbaadiyay gurmad iPhone ee Apple daruur server.
1. Waa maxay ma gurmad iCloud?
hayaan iCloud iibsato taariikhda music, filimada, bandhigyada TV, barnaamijyadooda, iyo buugaagta, sawirrada iyo videos in Roll Camera ah, goobaha qalab, xogta app, screen guriga iyo ururka app, iMessage, qoraalka, iyo farriimaha MMS, ringtones, muuqaal farriinta.
Fiiro gaar ah: Apple oo kaliya aad bixisaa 5GB lacag la'aan ah lagu kaydin jiray oo iCloud. Hubso in aad leedahay daruur kaydinta ku filan ka hor inta iPhone taageerto ilaa iCloud. Ama, waxaad ka iibsan kartaa 10 GB / 20 GB / 50 GB iCloud kaydinta. Fiiri qiimaha u hagaajinta kaydinta iCloud.
2. Tallaabooyinka iPhone kaabta in iCloud
Tallaabada 1. Hubi network WiFi u rogmatay aad iPhone.
Tallaabada 2. Tag Settings > iCloud
Tallaabada 3. Haddii aadan saxiixa in account iCloud, calaamada ku sugan.
Tallaabada 4. Tubada Kaydinta & kaabta > kaabta Hadda .
Isbarbar ka mid ah Lugood, iCloud iyo Wondershare MobilerTrans
Faa'iido Ugu xogta iPhone kaabta; IPhone kaabta in daruurta;
computer ma u baahan tahay; a 1. Just 1 click, oo aad u deg deg ah;
2. Kaabta audio aan iibsaday iyo video;
3. Kaabta Photo Library;
Qasaarooyinka 1. Too waqti lumis;
2. Ay ku guuldareysato inay gurmad audio aan iibsaday iyo video; 1. u baahan tahay waqti aad u badan;
2. Just 5 GB ee lagu kaydiyo oo bilaash ah, waayo, meel dheeraad ah, waxaad u baahan tahay inaad bixiso,
3. Can aan gurmad oo dhan xog ku saabsan iPhone; 1. guul daraysatay in ay xog gurmad app, goob qalab, xisaab, iwm
Habka 4. Sida loo kaabta jailbreak iPhone
Chine waxaa laga heli karaa iPhone in files gurmad waxaa on aan JAILBREAK. Maxaa dhacaya haddii aad iPhone waa jailbroken? Waa in aad rabtid in ay barnaamijyadooda JAILBREAK gurmad, goobaha JAILBREAK iyo faaidaysan. Ayaa waxaan la baadho internet-ka iyo ugu dambayntii heli 2 xataa kuwa waaweyn.
PKGBackup waa app cabsi badan, oo aad awoodaan in ay barnaamijyadooda gurmad JAILBREAK, faaidaysan, goobaha JAILBREAK iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan jailbroken iPhone tahay. Haddii aad leedahay xisaab DropBox ah, waxaad sidoo kale, waxaad si fudud iyaga meel kasta ka heli kartaa awoodo xogta iPhone gurmad u ah inay sidaa. Haddii aanad lahayn xisaab DropBox ah, waxaa gurmad iyo badbaadi doonaa xogta iPhone in an buug cinwaanka xiriirka. Maalin maalmaha marka aad rabto in la soo celiyo aad iPhone, aad u hagaagsan kartaa iPhone la Lugood iyo u isticmaalaan cinwaanka buugga xiriir ah si loo soo celiyo aad iPhone. Daymada kaliya waxa ay leedahay waxaa laga yaabaa in aan user-friendly. Waa wax aad u adag in la fahmo marka hore. Laakiin waa mid aad u adeegayaa.
Tallaabo-tallaabo hage user ku saabsan sida loo daadiyo JAILBREAK iPhone gurmad la PKGBackup >>
Sida PKGBackup, AptBackup sidoo kale loo isticmaalaa in gurmad Cydia-rakibay barnaamijyadooda ku saabsan jailbroken iPhone. Waxay leedahay interface ah mid aad u fudud, taas oo kaliya ayaa bixiya laba fursadaha aad: kaabta iyo Soo Celinta. Waxay abuurtaa liiska oo dhan barnaamijyadooda iPhone Cydia-rakibay oo qaadan gurmad ah ee liiskan. Markaas, marka aad u cusboonaynta firmware ah, waxaad isticmaali kartaa liiskan si ay dib ugu barnaamijyadooda si toos ah.
Tallaabada 1. Ku rakib AptBackup via Cydia, waxaad ka heli kartaa sida u qabo qaybta System (source BigBoss) ah.
Tallaabada 2. Tubada kaabta si ay u abuuraan liiska barnaamijyadooda.
Tallaabada 3. nidaameed aad iPhone la Lugood, si ay liiska uu synced in Lugood .
Tallaabada 4. Ka dib markii la xariirta aad iPhone si iPhone firmware ugu dambeeyay, waxa JAILBREAK iyo dib AptBackup via Cydia.
Tallaabada 5. Run AptBackup iyo tuubada Soo Celinta in dib Cydia ku rakiban Chine oo ku jira liiska la in taageeray isticmaalaya Lugood.
3 Siyaabaha kaabta iPad hor macruufka 8 Hagaaji
3 Siyaabaha kaabta iPod xiriiri ay Gordhaw Kadhoofaan 8 Hagaaji
Best 15 Apps ee macruufka 8
5 Waxyaabaha la sameeyo ka hor inta Casriyaynta in macruufka 8
Sida loo rakib macruufka 8 on iPhone / iPad / iPod taabashada
macruufka 8 Update Dhibaatooyinka
Top 5 Talooyin in ay dardar macruufka 9/8
Hoos ka macruufka 8 ilaa macruufka 7
Kabsado fariimaha qoraalka on iPhone ka dib markii macruufka 8 Hagaaji
Android ka Bedelka Content si iPhone 6
Content Transfer ka Old iPhone si iPhone 6
2 Siyaabaha dayactir iPhone White Screen of Death
Ka iPhone Bedelka Music in Computer
A Guide Full inuu ku biirayo ka BlackBerry si iPhone
1.How in ay tirtirto podcasts ka iPhone
Full Video Aragtiyaha ah iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus
10 Apps u Nadiifinta iPhone Photos
Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka iPhone in Moto X
Sidee si ay u gudbiyaan Audiobook ka Computer si ay iPhone aan Lugood
Bedelka Photos ka iPhone ah in iPhoto
Sida loo Laablaab iPhone (5S / 5C / 5 / 4s / 4) Video Files
> Resource > iPhone > 4 Hababka ku saabsan sida loo kaabta iPhone hor Casriyaynta in macruufka 9/8